Ma na ị chọrọ ka n'ụlọ fim ga-afụ ndị mmadụ pụọ, ma ọ bụ ị chọrọ ike videos maka azụmahịa gị na ngosi gị ngwaahịa ọ bụla n'akuku, gị mkpa a 3D video onye omume. Ma na ọtụtụ dị iche iche omume si n'ebe, olee otú ị na-ahọrọ ihe omume ahụ bụ ihe ziri ezi n'ihi unu? Ụfọdụ bụ ndị free, ụfọdụ na-adịghị. Ụfọdụ bụ ndị siri ike na-eji, ebe ndị ọzọ na-ewere dị nnọọ a oge iji mụta ihe. E nwekwara ọtụtụ ụzọ na i nwere ike iji 3D omume maka videos - eke gị onwe gị, edezi dịbunụ video, ma ọ bụ na-emepe emepe animations. Iji nyere aka warara ala nhọrọ, ebe a bụ top iri free 3D video Ndinam omume.
Nke a na usoro-enye gị ohere dezie, bee, na mado videos mgbe fim ahụ bụ gbara ma ọ bụ i nwere ike ime ozugbo edezi. Ọ na-abịa pụrụ iche utịp na ị nwere ike itinye na ọ bụrụ na ị chọrọ. Ọzọ na-agụnye a video preview ihuenyo na-ahapụ gị na-ahụ gị film ikpeazụ version dị ka ị na-aga, na-ewepụ ihe ọ bụla nchegbu banyere ikpeazụ anya. Ị nwere ike idezi na ma 2D ma ọ bụ 3D na ikwu n'ụzọ, na kwa na-akwa definition videos. Ozugbo ị gụsịrị-eke gị masterpiece, i nwere ike ịkọrọ ya ozugbo on Facebook ma ọ bụ Twitter, ma ọ bụ gị Xbox 360 na akaụntụ. Nke a bụ otu nke ihe omume na a ikpe mbipute ma ọ bụ i nwere ike nweta nkwalite-ezu version maka niile nke atụmatụ.
Nke a kpam kpam free omume dịkwa nnọọ vasatail. Ị nwere ike Ibu Ibu ya na a ọnụ ọgụgụ nke OSs, gụnyere OS X na Linux, otú i nwere ike na-kacha uru nke ike nke ndị ígwè ọrụ. Ọ bụghị egwu, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere a Windows igwe - ọ ka ga-arụ ọrụ na Windows, kwa. Ị nwere ike ịmepụta na gị onwe gị ihe oyiyi na-eji Sculpting na-akpali ihe oyiyi ahụ na iji rigging atụmatụ. E nwekwara a ọdịnaya nchịkọta akụkọ otú i nwere ike tinye ederede gị videos. Nke a akpan akpan omume bụ bụghị maka mbido, Otú ọ dị. Omimi nke atụmatụ dị ịrịba ama, na e mere ya n'ihi na ahụmahụ video creators.
A bụ ihe ọzọ na-emeghe isi omume na nke ahụ bụ obere ihe ntinye-larịị enyi na enyi. Ị nwere ike iji ya n'ihi na gị ime gị onwe gị videos, ma ọ bụ na-eke mgbasa ozi videos maka azụmahịa gị. Waks abịa na pụrụ iche utịp wuru na dị ka ọkụ ma ọ bụ onyinyo e kere eke na ikwu n'ụzọ, ọ na-enye gị ike na video compositing. Ma ị chọrọ iji ya maka 2D ma ọ bụ 3D videos, Wax nwere ike ijikwa ya. Ọ adapts ga-eji na njikọ na ndị ọzọ video edezi omume dị ka Adobe Premiere ndị bụ ndị dị elu ndị ọzọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị maara otú, ị pụrụ iji ndịna-emeputa osooso na gị video kaadị ime edezi ma tinye pụrụ iche utịp ke ozugbo.
Nke a bụ na-emeghe isi omume e mere eji na Windows ma ọ bụ Linux. Nke a na usoro enye gị ohere ime ezigbo oge video edezi na a ọnụ ọgụgụ nke formats, na ị pụrụ ime ka 3D composites nakwa dị ka Flash fim. Gị video nwere ike si na film ma ọ bụ flash ebe nchekwa footage. Ọzọkwa wuru na bụ a video ọkpụkpọ na bụ dakọtara na ọtụtụ video na ọdịyo formats. The edezi akụkụ nke software enye gị ohere tinye na-ahọrọ nke pụrụ iche mmetụta na-eme ụfọdụ agba mgbazi. N'adịghị ka ụfọdụ n'ime ndị ọzọ omume, ọ dịghị Njirimara nzi nkekọrịta gị okokụre ngwaahịa, na ọ nwere ụfọdụ na-agaghị emeli dị ka ndakọrịta ebe ọ bụ na-emeghe-isi iyi. Mgbe i nwere ike ịnwale a omume ọ na-eri, Otú ọ dị, na ị bụghị ihe ọ bụla na i nwere ike iwepụ ya mfe ma ọ bụrụ na ọ na-enyo na-adịghị asatọ gị mkpa ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na gị ndị ọzọ omume.
6. Windows Movie Onye kere
Nke a bụ free Microsoft ngwaahịa na ị nwere ike ibudata maka Vista ma ọ bụ Windows 7 ígwè ọrụ. N'ihi na ọ bụ a Microsoft ngwaahịa, ị maara na ọ ga-tinye na gị ẹdude omume mfe enweghị esemokwu. Ị nwere ike ịmepụta videos, ma ọ bụ dezie ẹdude n'anya, na-azọpụta ha na ọnụ ọgụgụ nke video formats maka ebugote ma ọ bụ òkè. Ọ ga-ekwe ka ị bulite gị videos na weebụ ma ọ bụ ịkọrọ ha mfe. Windows Movie Onye kere nwekwara nwere ikike na-ka foto na-atụgharị ha n'ime a slide show. Chọrọ tinye gị onwe gị music, ma ọ bụ ọkacha mmasị gị song? Windows Movie Onye kere nwere ike ime nke ahụ.
5. Xara / Magix 3D Onye kere
Nke a na usoro-abịa na a ikpe mbipute otú ị pụrụ ịhụ ọ bụrụ na ị na-amasị ya, mgbe ahụ, kwalite ka ụgwọ mbipute ma ọ bụrụ na ị na-eme. Ọ na-arụ ọrụ Vista OS ma ọ bụ mgbe e mesịrị. I nwere ike ime gị onwe gị 3D ederede animations, dị ka mesmerizing nchekwa ihuenyo on Windows. Nke a bụ a zuru okè omume maka onye ọ bụla mgbe na-arụ ọrụ na-aga aga omume n'ihu. The interface dị nnọọ mfe ịmụta ihe, na ihe omume na-abịa na Nkuzi-enyere gị aka n'ụzọ. Ị nwere atọ ebe iji nweta usoro atụmatụ - n'elu menu mmanya, na nri menu mmanya, na site na nhọrọ menu na ekpe, ya ka ị ghara-enwe nchegbu banyere kpọmkwem na-echeta ebe ahụ na-ahụ ihe. Ịgbanwe agba, omimi nke onyinyo, na ndị ọzọ na nhọrọ na ala. Ọ bụrụ na ị nwere ike pịa na ịdọrọ, ị pụrụ iji Xara. Site n'ụzọ, Xara bụ aha ọhụrụ. Ọ na-akpọ Magix n'ihu.
4. MXF Ntụgharị
Nke a na usoro na e mere maka Windows Vista ma ọ bụ mgbe e mesịrị bụ a trialware version otú ị pụrụ ịhụ ọ bụrụ na ị na-amasị ya. Ọ na-e ọzọ n'ihi converting MXF faịlụ n'ime a na-adịgide adịgide video format karịa ka ọ bụ n'ihi na edezi videos. I nwere ike ịzọpụta videos na a ọnụ ọgụgụ nke nkịtị formats dị ka .mp4, AVI, na WMV, na N'ezie, tọghata 2D ka 3D. Ọ na-ekwe maka playback nke vidiyo na a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ, gụnyere mbadamba, smartphones, na-egwu ya edekọ usoro. Otu uru a omume nwere bụ na ọ pụrụ sere soundtrack si video-anọrọ ọdịyo track. Nke a na usoro bụkwa nnọọ ngwa ngwa, na ọ ga-eji na anọ asụsụ dị iche iche.
3. Cortona Movie Onye kere
Ị nwere okenye na kọmputa na-apụghị nnọọ ịnọgide na ụfọdụ n'ime ndị ọhụrụ software? Nke a bụ usoro ihe omume gị. Ọ na-azọpụta ọ bụla etiti ya ka ị ghara ida okpokolo agba dị ka ị na-aga. Nke a na usoro-enye gị ohere ichekwa na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị formats, dị ka .mov na WMV. I nwekwara ike iji ya maka screencapping na ichekwa ihe oyiyi dị ka .jpg, Bitmap, ma ọ bụ .png. Ọ nwekwara ike jidere video na 3D ghọọ mkpumkpu vidiyo ma ọ bụ ka oyiyi na i nwere ike ịzọpụta ma ọ bụ iyi. Cortona-enyere gị na-agụnye òké pointer image bụrụ na ị chọrọ ya maka instructional vidio, na i nwere ike tinye watermarks iji chebe gị ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ a omume ike izi ma ọ bụ instructional videos, Cortona pụrụ nnọọ ịbụ otu.
PackShot-arụ ọrụ na Windows kọmputa na iji Vista ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ọ bụ ezigbo maka eme videos maka azụmahịa gị mgbe ị na-adịghị oge ịmụta mgbagwoju anya na programmụ na isi mkpịsị aka site oké ọrụ ndị nduzi. Agbalị ere ngwaahịa dị ka akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ vases na internet nwere ike ịbụ ihe siri ike, ebe ọ bụ ndị mmadụ na-apụghị bulie ha elu na anya ha nile. Nke a na usoro enye gị ohere ime 3D animations gị ngwaahịa otú gị ahịa pụrụ fọrọ nke nta bulie ndị akpụkpọ ụkwụ. The wuru na-ọkachamara okwu ozugbo na igwefoto n'ihi ya, ọ na-arụ ọrụ niile seamlessly. Ị nwere ike tinye a mbugharị atụmatụ gị videos, kwa. Exporting gị videos ozugbo ozugbo ị na-mere na iji OneClick mma bụ ọzọ nhọrọ.
Nke a free omume ahapụ gị na-2D vidiyo na ọ bụla usoro na tọghata ha ka ha 3D mfe na Windows ma ọ bụ Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6. Ị nwere ike iji gị onwe gị vidiyo ma ọ bụ ndị ị zọpụta na mbupụ ha na .mp4, ma ọ bụ ọkụ ha ka ha disk na na na a DVD ọkpụkpọ. Wondershare Bụ ngwa ngwa, nnọọ ngwa ngwa. Ọ na-na-arụ ọrụ a na ọnwụ-na usoro otú video àgwà adịghị degrade na akakabarede usoro. Wondershare Na-agụnye a video edezi atụmatụ, kwa, otú i nwere ike ubi oyiyi ma ọ bụ tinye ndepụta okwu ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Ọ na-akwado formats nke ga-arụ ọrụ na mbadamba ma ọ bụ smartphones.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, e nwere ọtụtụ nke nhọrọ si n'ebe, ma ị chọrọ ime na gị onwe gị na-aga aga e kere eke, ma ọ bụ na ị dị nnọọ chọrọ dezie fim. Cheedị otú masịrị nwa gị onye nkụzi ga-abụ mgbe ọ odomo na ụlọ akwụkwọ ha oru ngo na 3D, ma ọ bụ otú emenye gị onyeisi ga-abụ mgbe ị na-eme na ngosi ná nzukọ kwa afọ iji 3D videos. Ma, ọ dịghị nke nwere ka gị azụ a dime, ma ị na-ahọrọ na-nweta nkwalite ole na ole na ndepụta na ha nọ ikpe omume.
Biko mara: Ụfọdụ nke software utu aha na ndepụta anyị bụ ikpe omume na-enye gị mmachi na ịnweta mgbe ikpe oge agwụ ma ọ bụ na ha enweghị niile nke atụmatụ iji ọrụ, ma, ebe ndị ọzọ na-emeghe iyi mmemme na-kpamkpam free.
> Resource> Top List> Top Iri Free 3D Video eso